Netkiosk kiosk ngwanrọ | kiosk sọftụwia mere ka ọ dị mfe!
2019 Standard Nyocha Netkiosk
2019 igwe ojii (Chrome kiosk) Netkiosk imperi
2019 mkpọchi Desktọpụ Netkiosk
2019 Netkiosk (Licens 4)
2019 Netkiosk (Iwepụ ndị ọzọ)
Invoice ịkwụ ụgwọ maka Netkiosk
Usoro Netkiosk na Ọnọdụ
Mmadụ Bịa ka Netkiosk
Netkiosk maka Windows | Software Kiosk ọkachamara mere ka ọ dị mfe!
mgbanwe | Nhazi
Nchịkwa na udo nke uche anyị na nhọrọ ndị anyị na-agbanwe agbanwe.
mgbanwe | Jiri ebe ọ bụla
Ike Kiosk Software dị ike ma na-agbanwe agbanwe maka iji rụọ ọrụ ọ bụla.
Nchịkwa niile na nhazi ntọala dị mfe ma dị ike | Tọọ ngwaọrụ kiosk gị na nkeji.
Kọmputa kiosk ọkachamara maka ebe ọ bụla.
Netkiosk bụ ngwọta ngwanrọ dị irè ma dị irè nke na-enyere gị aka ijide na kpoo kọmputa gị (s) na nchịkwa nchịkwa ha nwere nchebe. Ịchọrọ ijide n'aka na ndị ọrụ gị enweghị ike ịnweta ihe onwunwe ndị ọzọ karịa ndị ị kwere. Ị nwere ike ịhazi Netkiosk maka ndị ọrụ gị iji gboo mkpa gị. Iji Netkiosk nwere ike inyere gị aka ijikwa nchebe anụ ahụ nke kiosk na netwọk gị ma nye gị udo zuru oke. Site na igbochi ịnweta ụfọdụ ibe weebụ, akwụkwọ ndekọ na ọbụna ngwa ị nwere ike ijide n'aka na onye njedebe ikpeazụ enweghi ike ịnweta ebe a kpachibidoro. Naanị ị chọrọ isi kọntaktị IT iji hazie Netkiosk. Netkiosk na-arụ ọrụ na nsụgharị Windows niile. Anyị nwere ike ịhazi Netkiosk n'ụzọ zuru ezu iji gboo mkpa gị. Anyị ga-enyere gị aka inweta ọtụtụ n'ime Netkiosk site na ịme mgbanwe ọ bụla dị mkpa ịchọrọ ime Netkiosk ọrụ na ọnọdụ gị.
Ihe nchebe kiosk na-eme ka PC mechie atụmatụ ndị kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ọ bụla.
Nye ohere maka otu ma ọ bụ karịa na ebe nrụọrụ weebụ na ọnọdụ kiosk dị nchebe.
Standard Netkiosk bụ ngwanrọ ngwanrọ zuru ezu.
Ị nwere ike ịkwụsị ma jide ngwaọrụ (s) Windows gị ozugbo.
Ị nwere ike na-agba ọsọ Netkiosk Standard na nyocha ma ọ bụ ozi kiosk. Ị nwere ike mfe ịmegharị ihe nchọgharị ma ọ bụ ihe ọmụma kiosk mode site na mfe ịhazi ha nchịkwa. Ị nwere ike ịkpọchi otu ebe obibi ma chekwaa kọmputa ọ bụla site na ịnweta ọha. Nanị tinye adreesị URL ndị nwere ike ịnweta ma gbochie ndị ahụ na ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị. Ị nwere ike ịtọ weebụsaịtị nke onye ọrụ nwere ike ịnweta site na nhazi ndebanye ọcha. I nwekwara ike igbochi saịtị ma ọ bụ isiokwu ya na nchịkọta ọdịnaya. Ịnwere ike inye aka ma ọ bụ gbanyụọ bọtịnụ nhọrọ, bọtịnụ na nhọrọ ndị ọrụ iji kwado mkpa nke gị. Ndị ọrụ enweghị ike ịnweta ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ.
Ihe nchọgharị kiosk.
Debe ha nchịkwa.
Na-agba ọsọ n'elu Windows.
Njikere maka ojiji na nkeji
Oge nhazi oge ezighi ezi.
Ejiri ntanye jupụtara na ya.
Nanị ihe omume.
Nhazi dị mfe.
Omenala ma ọ bụ Windows OSK.
Wụnye 3.5 mb
Na-arụ ọrụ na nsụgharị Windows niile.
Ozi ndị ọzọ. / Budata Ọnwụnwa.
Na No.1 raara nye Google Chrome kiosk mode ngwọta.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị na ebe nchekwa Chrome kpoochi ma kwusi PC.
Na 11th nke November 2019 Netkiosk imperi ka a ga-eji Netkiosk imperi 2020 dochie ya. Lee ihe onyoonyo n’okpuru.
Site na Netkiosk imperi ma ọ bụ Chrome Kiosk, ị nwere ike ịkwụsị PC gị ozugbo ma mee ka Google Chrome nọrọ n'ọnọdụ nchebe. Netkiosk imperi ezubere iche iji kpochapụ Google Chrome na ọnọdụ kiosk dị nchebe. Site na nchịkwa ha nchịkọta ị nwere ike igbochi ohere ịnweta weebụ na ntinye akwụkwọ ọcha. Ọ bụ ezie na Chrome nwere nhọrọ nhọrọ kiosk nke a anaghị ekwe ka ị nweta ntọala ma ọ bụ mechie windo windo gị. A na-eji ihe omume omenala nke Netkiosk imperi mee ihe n'ụzọ gara nke ọma na December 2015 Spanish Elections. Na Netkiosk imperi gburugburu 4000 Windows mbadamba na-agba ọsọ Google Chrome. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-eji Netkiosk imperi iji hụ na ha nwere ohere ọha na eze ma ọ bụ ndị ọrụ PC. Dị ka nke May 2019 Netkiosk imperi ka bụ nanị ihe ngwọta ngwanrọ nke kiosk na-agba ọsọ Google Chrome na ọnọdụ kiosk dị ọcha.
Raara onwe ya nye ihe ngwọta Chrome kiosk.
Mkpọchi PC ozugbo.
Machibido ohere na weebụsaịtị 1.
Wụnye 10 mb
Niile Netkiosk nsụgharị. Ọnụahịa dị mfe. Ụdị ikikere ọtụtụ. Njikwa PC dị iche iche.
2019 netkiosk na-agụnye nsụgharị Netkiosk dị ugbu a.
Na 2019 Netkiosk ị na-akwụ ụgwọ ikikere ndebanye.
Ị nweta nsụgharị Netkiosk dị ugbu a ma ị nweta ikikere PC dị iche iche ịmalite.
Ederede gụnyere (gụnyere mmemme inyeaka n'efu)
2019 Standard Nyocha Netkiosk.
2019 na-enweghị ihe ọ bụla Netkiosk imperk
Igodo mkpọchi Netkiosk.
More info / Buy ugbu a.
Ngwa ohuru kiosk krisk kwadoro ngwa ngwa kịlịki. Na-enye gị njikwa na ike kachasị.
Netkiosk imperi 2020. Akụrụngwa Kiosk nke Chromium.
Netkiosk imperi 2020 bu ihe ohuru ohuru nke ngwa kiosk nke Chromium anyi. Netkiosk imperi siri ike dị ka Google Chrome na uru nke gbakwunyere n'inwe ike ịgbanye ihe nchọgharị kiosk ma ọ bụ ihe ngosi kiosk ihuenyo zuru ezu. Ogwe njikwa dị nchebe na-enye gị ohere ijikwa ntanetị peeji, ndepụta ọcha na nzacha ọdịnaya yana ihe mgbochi ọpụpụ omenala. Netkiosk imperi nwekwara usoro imetụ aka ọdịnala wuru arụ.
Netkiosk imperi na-arụ ọrụ na nsụgharị Windows niile.
Nchọgharị / gosipụtara kiosk nchọgharị gị.
Ndepụta ọcha na ndị ọzọ…
Ọ ga-adị anya
Backbround Nhọrọ ọdịnaya
Netkiosk imperi 2020. Hapụ 11 Nov 2019.
Tugharia ihe onyonyo nke Netkiosk imperi 2020. Akụrụngwa Kiosk nke Chromium.
2020 na-enweghị ihe ọ bụla Netkiosk imperk
Gosiputa (Pịa aka ekpe. Mepee na tab ọhụrụ)
Tụkwasịrị obi ọtụtụ ebe kemgbe 2011.
US na ngalaba ndị ọzọ gọọmentị na ọtụtụ ndị ọzọ nọ n'ụwa niile tụkwasịrị obi na Netkiosk.
Ụfọdụ ndị ahịa ahịa anyị n'oge na-adịbeghị anya gụnyere Porsche Leipzig, Daimler Germany, SMBC Bank Tokyo Japan na Marks & Spencer na-echekwa na UAE.
Ndị na-ahụ maka ọgwụ na Bayer. Ntinye aka na Netkiosk n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na Eshia.
Ntuli aka ndi mba Spain. 20th Disemba 2015: Usoro ntanetị Netwọk nke arụnyere na ngwaọrụ 4000.
Ntuli aka Ontario Canada. 7th June 2018: Usoro ntanetị Netwọk nke arụnyere na ngwaọrụ 25000.
Ntuli aka Canada saskcca 2020. Azịza Netkiosk ahịa.
Netkiosk na-arụ ọrụ dịka naanị 1 PC.
Hụ onye na-eji Netkiosk.
Daimler (Mercedes-Benz), Porsche, Marks & Spencer UAE, SMBC Bank Japan na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kọmputa kiosk dị mfe.
Na Netkiosk anyị na-arụ ọrụ na sofware kiosk. Ndị ahịa anyị gụnyere Ngalaba Gọọmenti, Ụlọ Ọrụ, Education na òtù ndị ọzọ, nnukwu na obere. Netkiosk tọrọ ntọala na 2011 na ebumnuche iji nyefee akụrụngwa dị ịtụnanya, gbanwee na ego bara uru. Ihe omuma nke anyi bu ime Netkiosk ihe kachasi ike, na kiosk Software site na nbuliwanye mgbe nile na ihe omuma. Mgbanwe nke ndị ahịa enyerela Netkiosk aka ịghọ otu n'ime ngwanrọ ngwanrọ kachasị mma ma tụkwasị obi na gburugburu ụwa. Ntinye ahịa ahịa bara uru na-enyere anyị aka ịnọgide na Netkiosk ugbu a ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya ma hụ na Netkiosk ga-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi ọ bụla nwere ike. Ụdị omenala anyị pụrụ iche na-enye ndị ahịa nnwere onwe na ike mgbanwe ịjụ maka mgbanwe ma ọ̄ bụ atụmatụ ọzọ dabere na mkpa na ihe ha chọrọ. Anyị na-atụ anya na nke a na-emepụta ngwọta mmeri maka onye ọ bụla
Ngalaba Enyemaka Netkiosk
Copyright © Netkiosk kiosk sọftụwia
Kwadoro site Netkiosk , 2019 Netkiosk Kiosk Software